Elephone M3 PRO, ya na gam akporo 6.0 na Sony IMX230 sensor | Gam akporosis
Elephone M3 PRO, yana gam akporo 6.0 na Sony IMX230 sensor
Onye na-eme Elephone na-eto obere obere ma na-aghọ otu n'ime ụlọ ọrụ ọkwa nke abụọ na-adọta uche kachasị na mba ya, yana ahịa ndị ọzọ. Companylọ ọrụ a amalitela afọ a na njedebe njedebe dị n'etiti na njedebe dị oke ọnụ na ọnụahịa dị mma maka ndị na-azụ ahịa. Ma, ruo oge ụfọdụ ugbu a, onye na-emepụta ihe na China ekpebiela ịmalite njedebe dị elu na njedebe kachasị elu na nkọwa na-adọrọ mmasị.
Ngwunye ya kachasị ewu ewu bụ ekwentị, P6000, P7000, P8000 na usoro P9000 ohuru ohuru. Mana ụlọ ọrụ ahụ nwere oke ọchịchọ ma ọ bụ ya mere o ji kwadebe ọtụtụ ngwaọrụ maka afọ na-esote, n'etiti nke pụtara ìhè, a smartwatch na Wear gam akporo na ngwụcha ọhụụ ọhụrụ ga-eso Elephone M2 dị ugbu a.
A ga-akpọ ndị ọhụụ ọhụrụ a Elephone M3 na Elephone M3 Pro. Ngwaọrụ abụọ a ga-adị ka nke a, agbanyeghị na ọ dị na mbụ, ụdị PRO ga-abụ nke emelitere. Versiondị a ga-enwe igwefoto na nchekwa dị n'ime dị ka nnukwu ọdịiche gbasara ngwaọrụ ọzọ nke otu ụdị.
Ndị a ngwaọrụ ga-Njirimara a processor arụpụtara site MediaTek, na Helio P10. SoC a bụ ihe kachasị mma n'etiti etiti na ahịa, ọ bụ ezie na ọ ka ga-ahụ otu esi ama chipmaker ọzọ, Qualcomm, na-eme na otu o nwere ike isi guzoro MediaTek. Na ọnụ ga-eme nke aluminom na a ga-ahịa n'okpuru ọhụrụ mbipute nke Android 6.0 Marshmallow. Banyere ọnụ ọgụgụ kachasị ike, M3 PRO, a ga-eji ya rụọ ihuenyo 2.5D 5,5 sentimita arụpụtara LG site na mkpebi nke 1080p.
Banyere ngalaba foto ya, ngwaọrụ ọhụrụ nke akara ndị China ga-etinye a 21 Ihe mmetụta Megapixel, nke IMX230 nke Sony. N'ime ihe ndị ọzọ, ngwaọrụ ahụ ga-enwe nyocha mkpisiaka, njikọta 4G ma ga-adị na agba dị iche iche, gụnyere ọla edo dị elu, gold champeenu na isi awọ.
N'ihi ya, anya na ihe niile anyị maara banyere ngwaọrụ. Anyị ga-echere ịnwe ozi ndị ọzọ gbasara ya ma, ya mere, chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara akụrụngwa ya ebe ọ bụ na nkọwa ndị na-adọrọ mmasị anyị na-amaghị, dịka RAM ngwaọrụ Anyị ga-echere maka nnweta ya na ọnụahịa ya, yabụ anyị ga-etinye uche na ihe niile na-eme na ọdụ a nke ewepụtara dịka otu n'ime ihe ndị kachasị mma nke ndị na-emepụta China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Elephone M3 PRO, yana gam akporo 6.0 na Sony IMX230 sensor